Rabshado udhaxeeya Oromada iyo Amxaarada Oo Kajira Magaalada Addis Ababa.
Saturday September 15, 2018 - 12:02:18 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in iska hor'imaadyo u dhaxeeya laba qowmiyadood ay dib ugasoo cusboonaadeen magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa iyo hareeraheeda.
Rabshado saameyn ballaaran yeeshay ayaa shalay ka dhacay qeybo badan oo katirsan wadanka Itoobiya, rabshadaha oo u dhaxeeya qowmiyadaha Oromada iyo Amxaarada ayaa billaawday kadib markii mid kamida siyaasiyiinta qowmiyadda Amxaarada uu sanado kadib wadanka dib ugusoo laabtay.
Dad ka caraysan dhaq dhaqaaqa siyaasadeed ee Amxaaradu ku yeelatay dowladda Itoobiya ayaa isugusoo baxay fagaarayaasha magaalada Addis Ababa waxayna xanibaad kusoo rogeen isku socodka gaadiidka dadweynaha iyo dhaq dhaqaaqa ganacsiga.
Sawirro lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya waddooyinka magaalada caasimadda ah oo haawanaya iyo dad caraysan oo xanibaad kusoo rogaya gaadiidka, khilaafka u dhaxeeya Oromada iyo Amxaarada ayaa ah mid soo jireen ah, Oromadu waxay aaminsanyihiin in ay leeyihiin Addis Ababa halka Amxaaradu ay sheegtaan in magaalada ay leeyihiin.
Xiisadaha waxaa cirka kusii shareeray kadib markii Abiy Axmed uu hoggaamiyaha Jabhadda Oromada iyo ciidamadiisa u ogolaaday in ay dalka dib uguso laabtaan kanasoo guuraan magaalada Asmara ee wadanka Eereteriya waxaana lafilayaa in Amxaaradu galaangal siyaasadeed iyo mid melleteri ku yeelato maamulka wadanka.
Qowmiyadda Oromada waa midda ugu tirada badan ee Itoobiya islamarkaana markii ugu horraysay qabatay xilka R/wasaaraha,wasiirka arrimaha dibadda iyo wasaarahada ugu muhiimsan xukuumadd balse wali waxay wajahaysaa cadaadis dhan walba ah.